Abiy Axmed oo ku guulaystay in Saldhiga ugu wayn ee AMISOM…
Howl galka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo AMISOM ayaa sii joogi doontaa deegaanada Soomaalida gaar ahaan xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya sida ay daabacday Majaladda Africa Intelligence.com.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ku guuleystey dadaal uu ugu jiray in uu saldhigga cusub ka siiyo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM gudaha Itoobiya gaar ahaan dhulka Soomaalidu degto waxa uuna ka helay magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida.
Saldhigaan ayaa AMISOM u fududayn doona howlgalkooda Soomaaliya sidoo kale waxaa laga difaaci doonaa amaanka gudaha dalka Itoobiya.
Jigjiga ayaa tababarada lagu siin doonaa ciidanka AMISOM ee ka qayb qaadanaya howlgalka ka dhanka ah Al Shabaab ee Soomaaliya ku socda in ka badan 14 sano.
Qorshahaan oo uu wado Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaan la ogayn sida ay u aqbali doonaan dhinacyada ay qusayso sida dowlaha AMISOM ciidanka ugu deeqay, Dowlada Faderaalka Soomaaliya, dhinacyada taageera Howl galka iyo Qaramada Midoobay.
Qorshaha bixitaanka AMISOM ee Soomaaliya
Akademi milatari oo Muqdisho ku taala ayaa lagu wareejiyey Ciidamada dawlada federaalka ah 28 February 2019. Illaa 500 oo ah ciidamada Burundi oo halkaasi fadhiisin u ahayd ayaa meel kale loo raray. 200 oo ka mid ah waxa la geeyey Maslax oo 20km dhanka bari ka xigta Muqdisho iyo 300 oo Jowhar la geeyey iyo saldhigyada hawlgallada jiida hore ee qaybta 5-aad.